Todobo ruux oo weerartey banaan baxii Kärrtorp - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Todobo ruux oo weerartey banaan baxii Kärrtorp
La daabacay fredag 28 februari 2014 kl 14.42
Maxkamada Södertörn maanta waxaa la soo taagey todobo ruux oo hormood ka ah dhaqaaqa la yiraahdo Svenska Motståndsrörelsen oo loo heysto in ay weerar u geystey bishii december dibax looga soo horhjedey cunsirinimada oo lagu dhigayey xaafadda kärrtorp magaaalada Stockholm. Maxkamadeynta kooxda waxey ka micno tahay dharbaao weyn oo ku dhacdey ururkan xagjirka cusuriga ah sida uu qabo Anders Dalsbro oo tafatire ka ah wargeyska u kuurgala kooxa xagjiriinta ah ee Expo.
- Ururkan arrintan waxey ku noqoneysaa dhibaato weyn waayo ururka ayaa ah mid aad dadka tirsan u yaryahiin, marka haddi ay galaan qaar badan oo kamid ah hogaankooda wxey taas u soo jiideysa ururka dhibaato baaxad leh. Ururkan sidiisaba waa koox aad u yar balse rabsho badan laakiin, ayuu yeri Daniel Dalsbro.
Dhaqdhaqaaqa Svenk Motstånsrörelsen ayaa ah urur u qaabeysan dabaqado oo kor laga maamulo isla markaan si aan qarsoodi aheyn iskugu waca nationalsocialisti oo ah afakkaraha ay wado qabaan xisbiyada iyo ururda nadziga ah. waxeyna adeegsadan farsamooyin rabshado ah si ay u gaaran hadafka ay leeyahiin. Waxaa la aas’aasey sannadkii 1990. Waana laan ka qabtey uurka kale naziizte ahaa oo la oran jirey Vit Ariska Motstånd oo u halgamayey kor yeelida jinsiga cadaanka ah. SMR ayaa dooneysa in ay dhamaan hadafyadooda ah bulsho ku dhisan mabaadiida National Socialist in ay ku gaaran rabsho iyo dhibaato abuur.
- Waan lagu dhiiro geliya xubnaha ururka in ay jirkooda dhismoodkooda diyaariyaan isna hubeeyaan , ,arka wax dhacaan u diiyaar garooban sidii ay u carari lahaayeen. Dhanka kale ururkan waa mid kacdoon doon ah oo raadinaya sidii ay u ridi la haayeen bulsho dalkan looga dhaqmo. Hadefkoodana waa sidii ay u hirgelin lahaayeen dowladd ku dhisan naziiztinimo oo ka hirgasha waqooyiga Yurub ayuu yeri
Anders Dalsbro ayaa qaba in maxkamadeynta maanta ku bilaabatey xubnahooda sare ay u cadeyneyso in ay yahiin mucaarad ka soo horjeeda hanaanka bulsho ee maanta jira. Waxaan ay u arkaan hanaanka bulsho ee maanta dalkaan looga dhaqo mid cadow ku ah oo raba in uu cirib gooyo jinsiga cadaanka ah, huuna yahay shirqool ay yahuudo ka danbeyso. Laakiin maxkamadeynta ku bilaabatey maanta tobada ruux ee kamid ah ururkan waa sidee fursad loogu ridi karo xukun Anders Dalsbro iyo mar kale.
- Waxaad moodaa in xeer ilaaliyaha uu heysto cadeymo badan sida dokumentiyo iyo macluumaad ay kamid yahiin sms-yo ay is-dhaafsadeen, marka waxaad moodaa in cadeymaha badan yahiin ayuu yeri Anders Dalsbor.